Umhlahlandlela Ovela Semalt: Indlela Yakho Ibhizinisi Lingahamba Kanjani I-Digital
Ezinkampanini eziningi, ukuthuthukiswa kwezobuchwepheshe kwenkathi entsha yedijithali kubonisaamandla angenamkhawulo. Amafemu amaningi aya ku-intanethi ngenxa yekhono lokuhamba phambili le-Search Engine Optimization (SEO). Ngenxa yalokho, kunjalokubalulekile ukuba ibhizinisi lamukele i-intanethi njengesiteshi esisha sokumaketha, okungenza amabhizinisi aphumelele kahle.
Ukwenza ibhizinisi lakho ledijithali liphumelele ku-intanethi, cabangela lezi zici, ngokunembileechazwe ngu-Oliver King, iMenenja Yokuphumelela Kwekhasimende Semalt - retratos fotograficos tecnica shoes.
1. Imishini ehlakaniphile
Ukusebenza komshini kuthatha imizamo yabantu ngokusheshisa. Kwezinye izimo, kukhona ukuphakamaukusetshenziswa kwamadivayisi smart. Ku-intanethi yezinto (i-IoT), abahlaziyi babikezela ukuthi ngo-2020, ngaphezulu kuka-20.8 billion "imishini ehlakaniphile"uzosebenzisa uxhumano lwe-intanethi. Ngokusho kobuchwepheshe bamuva, amadivaysi ejwayelekile asebenzayo anamakhono afana nalokhu:
Ukuzenzekelayo njengezimoto zokuzishayela
Ukuzwa (njengezinzwa ze-IOT ezifana ne-NFC)
ukunyathelisa okungu-3d ngokudala ukuhumusha oku-3d ngokomzimba
Ukuhlanganyela ama-API anike amandla amandla okuphila okukhona ku-intanethi
Ukuxhumana komsebenzisi njengokuhlonishwa kwenkulumo, izigxivizo zeminwe kanyeukuhlanza ukusesha
2. I-Computing Cognitive
Intelligence Intelligence (AI) ithatha ukusebenza komshini ohlakaniphile.Ngokusebenzisana kobuchwepheshe obuhlukile, amakhompiyutha anokwazi ukucabanga, angaxhumana, afunde futhi aqonde izwe lomuntu..Okwamanje, imishini ehlakaniphile enezinhlakanipho zokufakelwa ihlanganisa umsebenzi wabantu. Basiza ngezici ezinjengaleziukubikezela kanye nokuqonda ekushintsheni okubalulekile. Ezweni lebhizinisi, amakhompiyutha angahlaziya izitayela futhi anikeze isisombululongethuba eliphakeme lokuphumelela.
3. Ukuphazamiseka Kwezinguquko
Ubuchwepheshe buqine kakhulu uma kuziwa kwi-IT. Lokhu kuthuthukiswa kushoukuthi kufanele ulungele ukwamukela izindlela ezintsha zokuthuthukisa ibhizinisi lakho. Amasu amasha angabandakanya ukuphazamiseka okukhulu okunjalonjengoba kuqashe abasebenzi abaningi futhi ukuthola ukusetshenziswa kwabanye abasebenzi akuvumelekile. Ukuphazanyiswa kungabandakanya ukuthatha abasebenzi bakho ukuqeqesha inthanethiamasu afana nokwakhiwa kwamakhono. Lolu hlobo lokuphazanyiswa alutholwanga ngokucophelela ngabasebenzi abaningi. Njengoba abanye bephikisa, kuwumsebenzi wakhoukubenza baqiniseke ngokubaluleka kwendlela kanye nenzuzo yesikhathi eside enkampanini.
4. I-Digital Technologies
Lokhu kufaka phakathi izici ezingenhla kanye nenkathi yedatha nokuhlaziya. Okushaamabhizinisi aqala ngenxa yamathuba amaningi e-intanethi namakhompiyutha aletha. Ngokwesibonelo, ezweni lemishini,Amawebusayithi abenza umlando wabo ngokwenza ngokucwenga okuqukethwe kwabafundi bawo. Izinjini ezifana ne-Google zinamandlaukubikezela into yokusesha oyifunayo. Kwezinye izimo, ukukhangisa okuhlosiwe kuthathe i-inthanethi ukuletha isithombe esingconoukuhlaziywa kwemakethe.
Izinkampani zingangena ku-Inthanethi ukuzothola ukuthengwa kwamakhasimende amasha njalo. Nge-SEO, abasebenzisiyakha ubukhona bezinhlamvu eziqinile kanye nokubhuka indawo enempilo kuma-SERP ngesethi enikeziwe yamagama angukhiye. Lesi simo sinhliziyokokudayiswa kwe-intanethi. Njalo ibhizinisi lizama ukufeza lokhu. Lezi zinto ezingenhla zingashukumisela ibhizinisi lakho ukuthi lifake ukuhlanganiswaindawo yedijithali kwezinye zezici ezibalulekile eqinile.